Dekeda Berbera Oo Soo Iibsatay Taagii 2aad Oo Casriya, Dalkana Soo Gaadhay. – HCTV
Ahmed Cige 0	September 12, 2020 4:29 pm
Diyaarada Hermeus Qorshaheedu Wuxuu Yahay Inay U Duusho New York Ilaa London 90 Daqiiqo
“Waxaan Halkan Uga Mahadcelinaya Madaxweynaha JSL Md. Muuse Biixi Cabdi Oo Run Ahaantii U Hagar-Baxay In Hantida Intaa Le’eg Inaanu Gelino Oo Dib U Dhis Ku Samayno Dekeda Berbera”. Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi.
Berbera, (HCTV) – Maareeyaha guud ee Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi, ayaa Bad-weyn kaga Hor-tagay Taagii labaad oo Casriya ee ay yeelato Dekeda Caalamiga ah ee Berbera.
Maareeyaha oo ay weheliyaan Cutubyo ka Tirsan Ciidamada Ilaalada Xeebaha Somaliland, ayaa soo galbiyey Taaga cusub oo laga soo Iibiyey Dalka Turkiga, Isla markaana ay soo Iibsatay Haayada Dekedaha Somaliland.
Markii uu soo gaadhay Taagi Marsada caalamiga ah ee Dekeda Berbera, ayaa waxa halkaa ka Hadlay Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi oo Faahfaahiyey Baahida Keentay inay soo iibsadan Taaga iyo horumarka baaxada leh ee ka socda Dekeda. Waxanu yidhi isagoo arrimaha ka Hadlaya.
“Ilahay ayaa mahad-leh markaa koowaad, markaa labaad waxaan Halkan uga mahadcelinaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi oo run ahaantii u hagar-baxay in Hantida intaa le’eg inaanu gelino oo dib u dhis ku samayno Dekeda Berbera, waxanaan Leeyahay Madaxweyne aad iyo aadbaad u Mahad tahay. Waxaan leeyahay dadkii lahaa Madaxweynuhuu wuxuu han-daraabay Hantidii qaran, Maanta waxay soo goysay hantidii la handaraabay Taagaga Casriga ah.
Waxaan u sheegaya Bulshada Somaliland Hantidii Madaxweynuhuu handaraabay wax badan, ayey dhashay, waxanaan jecelaahay inuu sii Han-daraabo si loo qalabeeyo, loona casriyeyeeyo, Kaamayaasha dhaqaalaha ee dalka”.
Ayuu yidhi Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan. Isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu yidhi Maareeye Siciid Xasan Cabdilahi: “Waxa Maanta Dekeda caalamiga ah ee Berbera soo gaadhay Taagii labaad oo Casriya, oo lamida kii hore, Taagani wuxuu leeyahay Dab-demis Ilahay inooma Keene, hadii Dab ka kaco Badda inuu soo bakhtiiyo ayaa loogu talo-galay. Maanta Deked ahaan waanu isku filanay, sidoo kale maanta waxa Dekeda Berbera kusoo xidhan kara Maraakiibta waaweyn ee Mather-ship-ka ah”.